Somali News 11.29.21
Published November 30, 2021 at 1:01 PM CST
Garsoore federaal ah oo ku sugan Missouri ayaa si ku meel gaar ah u xannibay amarka tallaalka federaalka ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee 10 gobol, oo ay ku jiraan Iowa, Nebraska, iyo South Dakota.
Maamulka Biden wuxuu u baahan yahay tas-hiilaad daryeel caafimaad si loo hubiyo in shaqaaluhu si buuxda uga tallaaleen COVID-19 Janaayo 4-teeda ama ay halis ugu jiraan inay waayaan maalgelinta federaalka.
Waajibka tallaalka waa la hayaa ilaa laga helayo maxkamad ama maxkamad si kale tiraahda.
Hadda, qiyaastii 69% Iowans da'doodu tahay 18 ama ka weyn ayaa si buuxda looga tallaalay COVID-19. Degmada Woodbury heerku waa 64.6%. Degmada Siouxland ee leh heerka ugu sarreeya ee tallaalka waa Buena Vista oo leh 79.5%. Degmooyinka Sioux iyo Lyon ayaa leh kuwa ugu hooseeya iyagoo leh 51%.
Dhanka kale, tirada bukaannada isbitaallada la dhigay COVID-19 ayaa sii kordheysa gobolka oo dhan.
Websaydhka Iowa Coronavirus wuxuu muujinayaa 665 bukaan oo cusbitaalka la dhigay fayraska, marka loo eego 616 warbixintii ugu dambeysay ee Jimcihii.
Heerka togan ee 14-maalmood ee Iowa wuxuu kordhay qiyaastii saddex meelood meel boqolkiiba ilaa ku dhawaad 11%. Heerka todobada maalmood ee degmada Woodbury waa 9% iyo 210 xaaladood usbuuc gudihii. Heerka togan ee Degmada Ida waa 26% oo leh 37 xaaladood hal toddobaad gudaheed.
Guddoomiyaha South Dakota Kristi Noem ayaa raadinaysa door laba da